१८ वर्षमै विधवा भएकी मन्दिपकी श्रीमती भन्छिन्, ‘यो काखको छोराले बाबा भन्न पनि पाएन’ (भिडियोसहित)
June 2, 2020 2618
८ महिनाको छोरा काखमा छ । कलि’लो उमेर छ । १८ वर्षको कलिलो उमेरमा’ श्रीमानलाई उनकै साथीले ह त्या गरिदिए । उनको अगाडी आकास जस्तो जिवन बाँकी छ । यो सानो काखको छो’राले बाबा भनेर बोलाउन पनि पाएन । १८ वर्ष उमेर टे’केकी यि युवतीको भविष्य अब के होला ?घरमा केही साथी उनका श्रीमान’लाई बोलाउन आए ।
राति उनी आएनन् । श्रीमती सु’तेकै थिइन् । छिमेकीले ढोका ढक’ढकाउन आए । एक जना महिला उनलाई ढोकामा बोलाउन आएकी थिइन् । हतार गरेर उठीन् के भयो दिदी ? किन बोला’उनु भयो भनेर सोधिन् ।
जव उनको दिदीले आफ्ना श्रीमान यो धर्तीमा नभए’को कुरा सुनाइन् उनले टेकेको जमि’न भा’सियो । आँखा अगा’डी अँध्यारो भयो । उनी दौडिएर खोला किनारमा पुगिन् । अवस्था हेर्न सकिने थिएन ।
उनले आफ्ना श्रीमा’नको अवस्था हेर्न सकिनन् । अहिले पनि त्यो दृष्य आँखा अगाडी घुम्छ । जुन दिन देखि मनदिपले छोडेर गए श्रीमती र उनको आमाको आँखा ओ’भाएको छैन । उनले राती १२ वजेसम्म श्रीमानलाई फोन गरेकी थिइन् । साँझ ७ वजे साथी घर’भन्दा तल बोलाउन आएका थिए ।
श्रीमानले जाने बेलामा म आज साथीह’रुको मै बस्छु भोली आउँछु भनेर गएका थिए । साँझ श्रीमानलाई बोलाउन आउँदा ७, ८ जना साथी थिए । एक जना घर नजिक आएर बोलाए उन’लाई देँखे तर अरु अलि पर बसेका थिए । उनीहरुलाई भने आफु’ले नचिनेको बताइन् । श्रीमान साथीले बोलाए”र गएपछि फर्केर आउँछन् की भनेर रातभरी ढोका पनि नलगाई कुरीन् ।
विहान पख निदाएकी थिइन् छिमकी दिदी आएर त्य’स्तो खबर दिएको बताइन् ।अकालमा ज्या’न गुमाएका मनदिप’को जिवन संधै दुखैदुखमा बित्यो । ११ वर्षको छोरालाई छोडेर पहिलो श्रीम’तीले छोडेर गएपछि उनले अर्को विवाह गरे ।
वुवाले पनि केही वर्ष अघि नै छोडेर गए । बुवाको निधन भएपछि परिवारको सबै आर्थिक भार मनदि’पकै काँध’मा थियो । ११ वर्षको छोरालाई छोडेर हिडेप’छि उनले सहा’राको लागि अर्को विवाह गरेका थिए । १६ वर्षको नाबालिक विवाह गरेका मनदिप विवाह भएको २ वर्षमै अस्ताए । १८ वर्षको उमेरमा वि’धवा बनाउने मन’दिपका साथीलाई कडा कारवाहीको माग गरेकी छन् ।
Prevआज जेठ २० गते मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
Nextआज एकैदिन २८८ जनामा कोरोना पुष्टि
सुनको भाउ घट्यो, आज तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ? हेर्नुहोस्
पल प्रकरणः थापाको घरको कोठामा त्यो दिन के भएको थियो ? (घटना विवरणसहित)
पर’पुरुषसँग सम्बन्धको शंका गर्दै श्रीमानले काटि’दिए आफ्नै श्रीमतीको नाक….
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (132741)
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, एकाएक टिक-टकमा भाईरल (भिडियो सहित) (105008)